Aan toos ahayn | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 11, 2020 10: 23 No Comments
Peter af Ingiriisiga waa Butros wuxuuna akhriyaa "Pita" (Ptēr), laakiin dhab ahaantii Peter waa magac reer galbeedka ah oo laga abuuray Ptah (ilaah Masri ah), kaasoo sidoo kale akhrinaya "Pita" (Ptēr). Ptah ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 11, 2020 07: 07 No Comments
Sababta oo ah wax kasta oo caddaan / reer galbeedku ay fahmaan ama sameeyaan waa diidmo. Hadana, waa masayr maxaa yeelay waa dadka Madowga / Afrikaanka ah ee sameeyay cajaladan. Masayrka ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 10, 2020 06: 07 No Comments
Muxuu madow had iyo jeer ugu ekaadaa masiibo? Diintani reer galbeedka ah waxay baraysaa Negro in Negro uu yahay habaar. Wuxuu baray inay necbahay wax kasta oo ku saabsan Noi ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 10, 2020 04: 22 No Comments
Si run ah marka loo hadlo, sidee bay dadka Madowga / Afrikaanka ahi u rumeysan karaan diin ama ilaahe ragga noocaas ah ee naxariis darada ah, ragga leh dhagxaan qalbiga ka beddala? L ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 10, 2020 02: 00 No Comments
David Duke wuxuu soo xiganayaa taariikhyahanada Yuhuuda ah ee cadeynaya doorka ugu weyn ee ay Yuhuuddu ku leeyihiin addoonsiga Galbeedka tan iyo ugu yaraan xilligii Roomanka wuxuuna sharaxayaa faafreebka warbaahinta ee ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 10, 2020 00: 00 No Comments
Nuglaanta weyn ee AU waa ku tiirsanaanta banaanka. Sidaa darteed waa ururada kale iyo kuwa ka shaqeeya xiriirka caalamiga inay iyagu hogaamiyaan. VS ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug12 01: 11